ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လှုပ်ရှားပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေ ဇ?? - Yangon Media Group
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လှုပ်ရှားပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေ ဇ??
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၀-ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အ ညီ လှုပ်ရှားပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေကြသည့် အတွက် ဇာတိသွေးမှေး မှိန်သူများ၏ ပုံ ဖျက်တံဆိပ်ကပ်မှုအပေါ် ယိမ်း ယိုင်တွေ ဝေစရာအကြောင်းမရှိဟု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးက ပြောသည်။
မေ ၃၀ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဗဟိုရုံးချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီလူငယ်ညီ လာခံ ၂၀၁၈ ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားတွင် အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ၎င်းင်း က အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ရင်လေး လွန်းလို့ ထုတ်ဖော်တိုက်တွန်းတဲ့ အခါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို အမျိုးသားရေးအစွန်း ရောက်တွေ လို့ စွပ်စွဲလာကြပါ တယ်။ ဘာ သာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချတယ် လို့ ကြိုတင်စွပ်စွဲလာတာတွေ ရှိလာပါ တယ်။ မိမိတို့ပါတီဟာ အခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ပေးထားချက်တွေနဲ့အညီ သာ လှုပ်ရှားပြော ဆိုလုပ်ကိုင်နေကြတာ ဖြစ်လို့ ဇာတိသွေးမှေးမှိန်သူများရဲ့ ပုံဖျက် တံဆိပ်ကပ်မှုအပေါ် ယိမ်းယိုင်တွေဝေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ” ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေဖြင့် အခက် အခဲအကျပ်အတည်းပေါင်းများစွာကြား က တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို လက်တွေ့ တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ သူ များဖြစ်ပြီး ယင်းအတွေ့အကြုံ ၊ စေတနာ၊ လုပ်အားတို့ဖြင့် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ ကို ဆက်လက်ပေးဆပ် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးသန်းဌေးက ပြောသည်။
“ဒီနေ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပကတိအခြေ အနေမှန်ကတော့ တောင်သူ၊ လယ်လုပ်၊ လခစား၊ လက်ခစားကနေပြီး လုပ်ငန်းရှင် ကြီးတွေအထိ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ကျပ် တည်းမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတာ၊ မရေရာတဲ့အနာဂတ်ကို စောင့်မျှော်နေ ရတာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းင်းကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပ ရခြင်းမှာ အတွေ့အကြုံများကို လူငယ် များထံလက်ဆင့်ကမ်း တာဝန်ပေးအပ်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ တာဝန်ယူခြင်းနှင့် နေရာယူ ခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ပါတီဥက္ကဋ္ဌမှစ၍အောက် ခြေထိ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု အပြည့်ရှိ ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းင်းက ပြောသည်။
ယင်းညီလာခံသို့ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးမှ လူငယ်ကိုယ်စား လှယ်ပေါင်း ၈၈၂ ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း အဆင့်၊ လူငယ်တာဝန်ခံစုစုပေါင်း ၁၄၂၆ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အိမ်ခြေ ၁၉၀ ကျော်အပါအ၀င် စာသင်ကျောင်း များနှင့် ဘုန်း??
ပြည်သူကိုအကျိုးမပြုသည့် ဂေါက်ကွင်းများအတွက် နှစ်စဉ်စာရင်းပြ ဘတ်ဂျက်ထုတ်နေပါက နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍ?
ပထမ ခြောက်လ အခွန်ကောက်ခံရရှိငွေ သုံးနှစ်အတွင်း အနည်းဆုံးဖြစ်
”ခံစားချက်ထည့်ပြီး အရမ်း ဟာသ မဟုတ်တဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးတွေက ညီမနဲ့ ပိုလိုက်တယ်။ ပိုလုပ်နိုင်တ
အင်ဂျလီနာဂျိုလီက အမျိုးသမီး အားလုံးအတွက် မျိုးဗီဇ စမ်းသပ်မှု ခံယူ
မင်းသမီး အန်ဂျလီနာဂျိုလီနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ကနူးရိဗ်
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျနေမှုကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှ လူနေအိမ်များ ဘေးလွတ်ရာသို့ ကြိုတင?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလ ရှိသင့်သည့် အလေးချိန် ပမာဏ